🥇 ▷ Asus ROG Phone II: taleefanka casriga ah oo leh muuqaal 120 Hz ah ayaa gaadhay Yurub ✅
Asus ROG Phone II: taleefanka casriga ah oo leh muuqaal 120 Hz ah ayaa gaadhay Yurub
Ka dib markii Asus uu mar hore soo bandhigay taleefanka ‘ROG Phone II’ ee Shiinaha Shiinaha dhammaadka Luulyo, taleefanka casriga ah wuxuu helayaa waddo uu ku maro Yurub isagoo wata aaladda loo yaqaan ‘Qualcomm’s Snapdragon 855 Plus’, xawaaraha 120 Hz oo muuqaal ah iyo illaa 1 TB oo ah xusuusta flash sida ay sheegtay UFS 3.0: At the IFA Sanadka 2019, qoraalada Elite iyo Ultimate waxay u dabaaldegaan bilowgooda.
Laba nooc oo Yurub ah
Telefoonka ‘ROG Phone II’ waxaa laga heli doonaa laba nooc oo dalkan ah: Daabacaadda Elite Edition oo leh 512 GB flash iranti iyo kiis madow oo dhalaalaya oo loogu talo galay qiimaha tafaariiqda ee 900 euro iyo Ultimate Edition oo leh 1 xasuusta Flash, hal matt madow midab iyo qiimaha tafaariiqda ee la soo jeediyay oo ah 1,200 euro. Labada noocba waxay ku tiirsan yihiin heerka xusuusta degdegga ah ee UFS 3.0, kaas oo horeyba ugu sameeyay OnePlus 7 Pro (tijaabinta) “Gaariga ‘Formula 1’ ee ka dhex dhaca taleefannada casriga ah ‘.
Marka laga hadlayo waxyaabaha kale ee gaarka ah, nooca Yurub wax badan isma beddeleyso: Qalabka cusub ee ‘Snapdragon 855 Plus’ ee ka soo baxa ‘Qualcomm’ oo leh saacad isku celcelis ah oo ah illaa 2.96 GHz, 12 GB RAM ee nooca LPDDR4X iyo Adreno 640 GPU waa inay weli ku filnaadaan FPS dhinaca Bandhiga 120 Hz (90 Hz ee jiilka 1aad) oo leh 2,340 × 1,080 pixels (Full-HD +), batteriga 6,000 mAh wuxuu hubiyaa in ROG Phone II uusan si dhakhso ah u dhammaanayn. Marka lagu daro Awoodda Degdegga ah ee 4.0, Asus wuxuu sidoo kale taageeraa gudaha-guriga ROG HyperCharge oo leh illaa 30 watts.
muuqaal 1 laga bilaabo 15
Muuqaal gaar ah oo loogu talagalay daabacaadda Ultimate laakiin markaa weli waa inay bixiyaan: Qalabka kaliya ee kala duwanaanta ah wuxuu taageeraa nooca calanka LTE Cat. 20 leh hoos-u-qaadis ah 2 Gbit / s ka weyn 4 × 4 MIMO, halka dhammaan kala duwanaanshaha kale ee LTE Cat. 18 iyo xiriir hoose ee 1.2 Gbit / s.
Hadda Dukaanka khadka Asus ee ku yaal qadka
Bandhiga IFA ee Berlin waa mid la mid ah suuqyada suuqyada ee Yurub, ugu yaraan noocii ugu fiicnaa, kaas oo laga heli doono hadda dukaanka internetka ee Asus waxaana la rajeynayaa badhtamaha bisha Sebtember on shelf ee ganacsatada. Sida laga soo xigtay Asus, daabacaadda Ultimate ayaa raaci doonta rubuc qarniga 4-aad ee 2019. Waqtigan xaadirka ah, taleefanka casriga ah ayaan wali laga helin Asus eShop.